Gudoomiyaha Deg Waaciye oo Xilkii la wareegay (Daawo Sawiro) – SBC
Gudoomiyaha Deg Waaciye oo Xilkii la wareegay (Daawo Sawiro)
Posted by Webmaster on March 27, 2012 Comments
Munaasabada xil wareejinta oo ay xilalka kula kala wareegayeen gudoomiyaha cusub ee degmada waaciye Dr Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan iyo Kusimhii degmada waaciye ahna kuxigeenka degmada waaciye Axmad Maxamad Cali.
Munaasabad oo kadhacaday hoolka degmada hoose ee Waaciye waxaana goobjoog ahaa masuuliyiin katirsan gobolka karkaar degmada waaciye deeganada ay maamusho iyo waxgardka deegaanka .
Ugu horayn waxaa goobta kahadlay kusimihii degmada Waaciye Axmad Maxamad Cali sheegayna in uu aad ugu faraxsan yahay xilka uu ku wareejinayo gudoomiyaha cusub .
Intii ay munaasabadu socotay waxaa Khadka Telefanka kaga qeyb galay gudoomiyihii hore ee Degmada Waaciye Isxaaq Axmed Saalax isagoo jooga Wadanka Ingisiirka, waxaanu ugu hambalyeeyay Maamulka Cusub, isagoona sheegay in gudoomiyaha loomagacaabay waaciye uu yahay Shaqsi ka bixi kara xilka loo dhiibay, waxuuna masuuliyintii hore ee Degmada u dardaarmay in ay la shaqeeyaan maamulka cusub.
Sidoo kale waxaa isna goobta kahadlay gudoomiyaha cusub ee degmada waciye Dr Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan gudoomiyaha ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay xilka uu kala wareegay kusimihii gudoomiyaha waaciye .
Gudoomiyaha degmada Dr Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan ayaa balan qaaday in uu waxbadan kaqabn doono horumarinta degmada waaciye iyo deegaanada ku hareraysan.
Qaar kamida odaaysha degaanka oo iyana goobta kahadlay ayaa soo dhaweyay gudoomiyaha cusub iyaga oo sheegay in uu yahay shaqsi kabixi kara xilka loo igmaday .
maashaalaahu kariim puntland qurux ayaa kamuuqatee hala ilaasho dowladnimada aynu haysano dad ba’yay oo hoogyaye inoo adkeeya mar haddii aanay gabdheheenii dhadhaab iyo doola caddo ama kharaj aysan buushash uga dhisnayn inoo adkeeya dowladnimadeena somalina raadsha oo walalihiin somaliyeed ha ilaawina.
waxaan ilaahay ka baryayaa inuu gudoomiyaha cusub uu xifdiyo xilka loo dhiibeyna uu ku ku caawiyo, dadka reer waciyena waan u hambalyeynayaa gudoomiyahooda cusub, Dr cabdisalaan waa nin xilkaa kasoo bixi kara, waa mutacalim maashallah, waa dhalinyar waa nin aamin ah oo aan ku aqaan karti dulqaad & xil-kas nimo, Dr. alle hakula garabgalo, aamiiiiiiiiiin.
aad ban ugu farxey mudane cabdi salaan magaca bistisa lakin waxan ku borin laha ama kula talin laha talada wa la wadaga in uu so jito dalinyarada wax bartey ee ku nool qurbaha si ey ugu fa idyeen mamulkisa madama uu yahey qof aqoon leh lana janqadi kara dalinta aqonta lh marka xooga saar mudane sidi ad kuso jidan laheyd dalinyarad mutacaliminta ah ee maskaxdodu fresh ka tahey gar ahana dibadaha wax kubartey wa iga talo hadi kale jug jug meshada fadi weyeen aqoontu waa waxa kaliya ee horma risa mujtamaca waa waxa kaliya kenta isdexgalka iyo xadarada wa waxa kaliy ee yareysa fakhriga iyo colada hadi la helo dalin aqoon leh wu horamarya wadanku aqontu waa base ka bani admaka ha lagu dadalo in wadanka lo gliyo gacanta dalinta frshka ah e wax kubaraty up-date ka wa bilahi tawfiiq
muna badisalan says:
waxaan alaah uga baryayaa gudoomiyaha cusub inuu xilka uu fududeeyo run ahaantii waa hawl culus waanku hanbalyaynaya guudoomiye Dr clsalaan bashiir clsalaan waxaad atahy aqoon yahayn mudana arimaha mamuulka kasoo shaqeyay waxaa tahy nin dal jeec waxaa tahay nin dulqaad badan waan uu hanbalyeyna shacabka waxaan leyahay waa nin inii qalma lashaqeeya ilahay haku fududeyo hawsha hortala amiim amiin ilove waiye
khadar warsame says:
Gudoomiyaha cusub Dr clsalaan bashiir clsalan hanbalyo gudoo miye alaah haku fududeeyo xilka aad qabaytay run ahantii waxaad tahay nin aqoon yahana oo dulqaad badan oo jecel dalkiisa waxaadna degaanka uu qabanaysa waxbadan wana kusoo dhawaynayna garabkaga naga eeg ilahaa haku fududeeyo walal amiin amiin bye khadar
Gudomiyaha cusub ee degmada waanku hanbalyaynaya waxaan alaah kaga baryayna inuu xilka kuu fududeeyo waxaad tahay aqoon yahan waxaad tahay nin daljec dulqaad badan waxbadan kasoo shaqeeyay mamuulka khibraad uu leh waankusoo dhawaynayna waana uu hanbalyaynaya shacabka degaanka waxaan lenahay la shaqeya gudoomiya waxaan alaah kaga rajynayna inad xilka kasoo baxdo kuna fududeyo bye khadar warsame&mauna bashir
gudomiye hanbalyo alaah haku fuduyeyo xilka
Gudoomiye hanbaalyo alaah haku fududeeyo xilka shacabka uu qabatay Dr clsalaan bashiir clsalan
xaaji shaam says:
Masha alah aad baan usoo dhowaynaynaa gudoomiyaha cusub ee degmada waciye mr C/salaan bashiir c/salaan oo runtii ah nin xilkaas kasoo bixi kara, insha alaah waan la shaqayn doonaa talo iyo ficilba hadii aanu nahay degaanka
habalyo hanbalayo waxan halakan uga hanbalyeynayna DR abdisalan bashir abdisalan gudomiyaha cusub e deg mada waciye waxan ilahay uga baryey na inuu xilkisa u fududeyo amin amin
yasin neero says:
Mashalah gobolka karkaar doorasho fican oo cadalada baa kadhacdey mashalah waaciye horseed kanoqda geedi socodkanabada mashalah waa wax adlogu farxo hormarka waa dadka dadku haday nabada kashaqeyan waxa kale iyagaa iska imanaya dadka qariibka iyo umada somaliyed inaad so dhawaysan gobolka wuxuu caankuyahay martigalinta marka halkaa kawada wadanolasha umada somaliyed ilahay had in SAA idsho karkaar